itoobiya oo Tiradii ugu badneyd laga helay COVID19 maalin kaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka itoobiya oo Tiradii ugu badneyd laga helay COVID19 maalin kaliya
warbixintii ugu danbeysay xanuunka saf marka ah ee COVID19 Ethiopia ,
Soddon (30) dad ka badan ayaa laga helay cudurka ‘# COVID19’ waxaana laga baadhey in ka badan 3645 baaris sheybaar oo la sameeyay 24-kii saac ee la soo dhaafay. Kuwaas, labaatan iyo lix (26) rag ah iyo afar (4) haween yihiin. Dhammaantood waa Itoobiyaan da’doodu u dhaxayso 15 illaa 60 sano jir.
Tani waxay ka dhigeysaa tirada guud ee la xaqiijiyay 429!
Shan qof ayaa sidoo kale soo kabsaday, iyagoo lambarka ka bogsatey ka dhigeysa 128.
Kaliya sagaal (9) ayaa leh taariikh safar. Toddo iyo toban (17) ayaa leh raad raac taabasho oo la xiriira kiisas la xaqiijiyay; iyo afarta (4) hartay ma leh taariikh safar, mana raad raacaan qandaraas, xaalad si aada u sii kordheysa.
30-ka, Sideed iyo Toban (18) ayaa ka socda #AddisAbeba; saddex (3) waxay ka yimaadeen gobolka #Afar; afar (4) ka socda gobolka #Oromia; saddex (3) ka socda gobolka #Tigray, iyo laba (2) darawallada xamuulka xadka.
Tijaabadooyinka waxaa laga soo qaaday xubnaha bulshada ee khatarta sare leh, xarumaha karantiil, iyada oo loo marayo raad raacyada xiriirka iyo booqashooyinka xarumaha xarumaha caafimaadka.
Itoobiya ilaa iyo hadda waxay sameysay 73, 164 shaybaar. Waqtigan xaadirka ah 294 bukaan ayaa ku jira xarumaha daaweynta.
4 cabitaan oo gubta dufanka kana takhalusi “caloosha iyo badhida”